Gool Dhali, Casaan Ha Lagu Siiyo, Taageerayaasha Kooxda Kale Erayo Ku Tuur, Kadibna Kulanka El Clasico Ha Lagaa Ganaaxo- Vinicius Jr Oo Ciwaano Badan Abuuray. - GOOL24.NET
October 21, 2018 Mahamoud Batalaale
Da’yarka aadka loo qiimeeyo ee kooxda Real Madrid ee Vinicius Jr ayaa waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo kale oo xun ciwaanada saxaafada dalka Spain ku qabsaday kadib markii uu sameeyay dhacdooyin kala duwan oo iska soo horjeeda.
Vinicius Jr ayaa saftay kulankii ay kooxdiisa Real Madrid B ee Casilla la ciyaartay kooxda dhigeeda ah ee Celta B wuxuuna dhaliyay gool laaga xorta ah uu ku tuuray kaas oo uu wanaag ahaan ciwaano ugu qasbay saxaafada Spain laakiin waxyaabihii ka danbeeyay ayaa goolkan cajiibka ah hadheeyay.
Real Madrid B ayaa guuldaro ku jirtay ilaa daqiiqadii 83 aad laakiin Vinicius Jr ayaa si qurux badan kubbad laga xorta ah ugu soo wareejiyay goolka Celta B si uu kooxdiisa Casilla ee Real Madrid B uu guuldaro uga badbaadiyo.
Laakiin daqiiqadii 85 aad Vinicius Jr ayaa kaadhka cas loo taagay kadib markii uu isku dhex tuuray xerada ganaaxa Celta B si uu rekoodhe ugu guulaysto wuxuuna markanba haystay kaadhka digniinta ah iyada oo kaadhka labaad ee digniinta ah iyo kaadhka cas laysku raaciyay.
Laakiin Vinicius Jr ayaa xaalada sii xumeeyay kadib markii uu si cadho leh uga falceliyay kaadha cas ee loo taagay wuxuuna erayo iyo tilmaamo uu kula jeedsaday jamaahiirta kooxda Celta B isaga oo astaanta garanka Real Madrid u tilmaamay isla markaana jawiga sii xumeeyay.
Laakiin kaadhka cas ee loo taagay Vinicius Jr waxa uu ku qasbayaa in uu ganaax kaga maqnaan doono kooxda kowaad ee Julen Lopetegui oo Barcelona la ciyaari doonta kulanka soo socda halka uu sidoo kale ka ganaaxnaan doono Casilla. Halkan ka daawo goolkii quruxda badnaa ee uu Vinicius Jr u dhaliyay Real Madrid B.
Vinicius Jr, take a bow ! pic.twitter.com/ZO543MGwle
— S⚽ccerapy (@soccerapy) October 21, 2018
Sharciga xidhiidhka kubbada cagta Spain ayaa dhigaya in ciyaartoy kasta oo kaadhka cas ku qaata horyaalka heerka labaad ee Segunda División B in uu aanu xaq u yeelan karin ciyaarista kulamada ugu soo horeeya ee isla horyaalkan iyo waliba horyaalka heerka kowaad ee La Liga.
Sidaa daraadeed, Julen Lopetegui ayaan kulanka El Clasico-da soo socota ee Camp Nou aan heli doonin fursad uu Vinicius Jr ugu soo darsan karo ciyaartoyda uu ku shaqayn doono wuxuuna Vinicius Jr seegay fursad uu kulankiisii ugu horeeyay ee El Clasico-da uu ugu hamiyi lahaa in uu daqiiqado ka ciyaaro.
Ilaa hadda wax faah faahin ah lagama hayo haddii Vinicius Jr uu ganaax dheeraad ah kula kulmi doono erayadii iyo falcelintii uu ku sameeyay jamaahiirta Celta B balse waxaa hubaal ah in uu seegi doono kulamada Casilla iyo kooxda kowaad ee Real Madrid ay ciyaari doonaan.